Muxuu sharciga ka qabaa in Ajnabi loo magacaabo Guddoominta Bangiga Dhexe ee Soomaaliya? – Somali Top News
Muxuu sharciga ka qabaa in Ajnabi loo magacaabo Guddoominta Bangiga Dhexe ee Soomaaliya?
January 12, 2019 Somali Top News	0 Comments
Xukuumadda Jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa todobaadkan lagu wadaa inay baarlamaanka federaalka ah hor keento wax badalka “Xeer Maamul Bankiga dhexe”, iyada oo arrintn ay horudhac u tahay in qof ajnabi ah loo magacaaba guddoominta bangiga dhexe ee Soomaaliya.
(1) Waa inuu noqdaa qof hufan oo Soomaali ah, heysta shahaado ama aqoon u dhiganta oo nidaamka maaliyadda, lacagta iyo guud ahaan xisaabaadka. In aaney wax ka hor istaagaya sida ku qoran, qodobka 14aad ee xeerkan
(2). Looma magacaabi karo guddoomiye bangi ama ku-xigeen isaga oo aan heysan Shahaado Jaamacadeed oo xagga maaliyadda, sharciga, lacagaha iyo dhaqaalaha la xiriirta. Qof aan heysan khibrad ka yar 12 sano.
← Saraakiil iyo Askar Soomaaliyeed oo helay Tababar caalami ah
Golaha Guurtida Somaliland oo kulan ka yeeshay dib u dhaca doorashooyinka →
Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya oo meel mariyay sharci cusub
December 21, 2018 Somali Top News 0
Xildhibaanada Galmudug oo la isugu yeeray kulan aan la shaacin Ajandahiisa
January 23, 2020 Somali Top News 0
Farmaajo oo caay iyo caro bulsho kala kulmay sawir uu lagalay General Tuke
September 28, 2019 Somali Top News 0